गुगल एनालिटिक्स अभियानहरूसँग इमेलमा UTM प्यारामिटरहरू कसरी काम गर्छन्? | Martech Zone
गुगल एनालिटिक्स अभियानहरूसँग इमेलमा UTM प्यारामिटरहरू कसरी काम गर्छन्?
बुधबार, फेब्रुअरी 23, 2022 बुधबार, फेब्रुअरी 23, 2022 Douglas Karr
हामी हाम्रा ग्राहकहरूको लागि इमेल सेवा प्रदायकहरूको माइग्रेसन र कार्यान्वयन परियोजनाहरू धेरै गर्छौं। कामको कथनहरूमा यो प्रायः निर्दिष्ट गरिएको छैन, तर हामीले सधैं तैनाथ गर्ने एउटा रणनीति भनेको कुनै पनि इमेल संचारहरू सुनिश्चित गर्नु हो। स्वचालित रूपमा UTM प्यारामिटरहरूसँग ट्याग गरियो ताकि कम्पनीहरूले उनीहरूको समग्र साइट ट्राफिकमा इमेल मार्केटिङ र सञ्चारको प्रभाव अवलोकन गर्न सक्छन्। यो एक महत्त्वपूर्ण विवरण हो जुन प्राय: बेवास्ता गरिन्छ ... तर कहिल्यै हुनु हुँदैन।
UTM प्यारामिटरहरू के हुन्?
युटिएम को लागि खडा छ अर्चिन ट्र्याकिंग मोड्युल। UTM प्यारामिटरहरू (कहिलेकाहीँ UTM कोडहरू भनेर चिनिन्छ) नाम/मानको जोडीमा डेटाको स्निपेटहरू हुन् जुन Google Analytics भित्र तपाईंको वेबसाइटमा आउने आगन्तुकहरूको बारेमा जानकारी ट्र्याक गर्न URL को अन्त्यमा जोड्न सकिन्छ। मौलिक कम्पनी र विश्लेषणका लागि प्लेटफर्मको नाम अर्चिन थियो, त्यसैले नाम अड्कियो।
अभियान ट्र्याकिङ मूल रूपमा वेबसाइटहरूमा सशुल्क अभियानहरूबाट विज्ञापन र अन्य रेफरल ट्राफिक क्याप्चर गर्न निर्माण गरिएको थियो। समयको साथ, यद्यपि, उपकरण ईमेल मार्केटिङ र सोशल मिडिया मार्केटिङको लागि उपयोगी भयो। वास्तवमा, धेरै कम्पनीहरूले अब सामग्री प्रदर्शन र कल-टु-एक्शन मापन गर्न तिनीहरूको साइटहरूमा अभियान ट्र्याकिङहरू प्रयोग गर्छन्! हामी प्रायः ग्राहकहरूलाई लुकेका दर्ता क्षेत्रहरूमा UTM प्यारामिटरहरू समावेश गर्न सिफारिस गर्छौं, ताकि तिनीहरूको ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन (सीआरएम) नयाँ लीड वा सम्पर्कहरूको लागि स्रोत डेटा छ।
यो UTM प्यारामिटरहरू हो:
utm_camp अभियान (आवश्यक)
UTM प्यारामिटरहरू गन्तव्य वेब ठेगाना (URL)। UTM प्यारामिटरहरू भएको URL को एउटा उदाहरण यो हो:
त्यसोभए, यहाँ यो विशिष्ट URL कसरी बिच्छेद हुन्छ:
Querystring (सबै कुरा पछि?):
नाम/मान जोडीहरू निम्नानुसार विभाजित हुन्छन्
utm_term=%20 अहिले किन्नुहोस्
क्वेरीस्ट्रिङ चरहरू हुन् URL एन्कोड गरिएको किनभने केही अवस्थाहरूमा खाली ठाउँहरू राम्रोसँग काम गर्दैनन्। अर्को शब्दमा, मानमा% 20 वास्तवमा एउटा स्पेस हो। त्यसोभए गुगल एनालिटिक्स भित्र क्याप्चर गरिएको वास्तविक डाटा हो:
अभियान: मेरो अभियान
स्रोत: मेरो इमेल सेवा प्रदायक
अवधि: अहिले खरिद गर
जब तपाईले बहुसंख्यक इमेल मार्केटिङ प्लेटफर्महरूमा स्वचालित लिङ्क ट्र्याकिङ सक्षम गर्नुहुन्छ, अभियान प्रायः अभियान सेटअप गर्न प्रयोग गर्ने अभियानको नाम हो, स्रोत प्राय: इमेल सेवा प्रदायक हो, माध्यम इमेलमा सेट गरिएको छ, र शब्द र सामग्री। सामान्यतया लिङ्क स्तरमा सेट अप गरिन्छ (यदि हो भने)। अन्य शब्दहरूमा, तपाईले वास्तवमै यीहरूलाई इमेल सेवा प्लेटफर्ममा स्वचालित रूपमा सक्षम पारिएको UTM ट्र्याकिङमा अनुकूलन गर्न केही गर्नुपर्दैन।
कसरी UTM प्यारामिटरहरू वास्तवमा इमेल मार्केटिङसँग काम गर्छन्?
एक प्रयोगकर्ता कथा गरौं र यो कसरी काम गर्नेछ छलफल गरौं।
ट्र्याक लिङ्कहरू स्वचालित रूपमा सक्षम भएको तपाईंको कम्पनीद्वारा इमेल अभियान सुरु गरिएको छ।
इमेल सेवा प्रदायकले ईमेलमा प्रत्येक आउटबाउन्ड लिङ्कको लागि क्वेरीस्ट्रिङमा स्वचालित रूपमा UTM प्यारामिटरहरू जोड्छ।
इमेल सेवा प्रदायकले त्यसपछि प्रत्येक आउटबाउन्ड लिङ्कलाई क्लिक ट्र्याकिङ लिङ्कको साथ अपडेट गर्दछ जुन गन्तव्य URL मा फर्वार्ड हुनेछ र UTM प्यारामिटरहरूको साथ क्वेरीस्ट्रिङ। यसैले, यदि तपाईंले पठाइएको इमेलको मुख्य भाग भित्र लिङ्क हेर्नुभयो भने... तपाईंले वास्तवमा गन्तव्य URL देख्नुहुन्न।
नोट: यदि तपाइँ कहिल्यै URL कसरी रिडिरेक्ट गरिएको छ भनेर परीक्षण गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ URL रिडिरेक्ट परीक्षक जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जान्छ.
ग्राहकले इमेल खोल्छ र ट्र्याकिङ पिक्सेलले इमेल खुला घटना क्याप्चर गर्छ। नोट: खुला घटनाहरू केही इमेल अनुप्रयोगहरूद्वारा अवरुद्ध हुन थालेका छन्।
ग्राहकले लिङ्कमा क्लिक गर्दछ।
लिङ्क घटना इमेल सेवा प्रदायक द्वारा एक क्लिकको रूपमा क्याप्चर गरिन्छ, त्यसपछि UTM प्यारामिटरहरू थपिएको गन्तव्य URL मा रिडिरेक्ट गरिन्छ।
तपाईंको कम्पनीको वेबसाइटमा सब्सक्राइबर अवतरण गर्दछ र पृष्ठमा चलिरहेको Google Analytics स्क्रिप्टले स्वचालित रूपमा ग्राहकको सत्रको लागि UTM प्यारामिटरहरू क्याप्चर गर्दछ, यसलाई डायनामिक ट्र्याकिङ पिक्सेल मार्फत सिधै Google Analytics मा पठाउँछ जहाँ सबै डाटा पठाइन्छ, र सान्दर्भिक डाटा भण्डारण गर्दछ। त्यसपछिको फिर्ताको लागि ग्राहकको ब्राउजरमा कुकी भित्र।
त्यो डाटा गुगल एनालिटिक्समा संचित र भण्डार गरिएको छ ताकि यसलाई गुगल एनालिटिक्सको अभियान खण्डमा रिपोर्ट गर्न सकिन्छ। तपाईंको प्रत्येक अभियान हेर्न र अभियान, स्रोत, मध्यम, अवधि, र सामग्रीमा रिपोर्ट गर्न अधिग्रहण > अभियानहरू > सबै अभियानहरूमा नेभिगेट गर्नुहोस्।
यहाँ कसरी इमेल लिङ्कहरू UTM कोडेड र गुगल एनालिटिक्समा क्याप्चर गरिन्छ भन्ने चित्र छ
UTM प्यारामिटरहरू क्याप्चर गर्न मैले Google Analytics मा के सक्षम गर्छु?
राम्रो खबर, तपाईंले UTM प्यारामिटरहरू क्याप्चर गर्न Google एनालिटिक्समा केहि पनि सक्षम गर्नु पर्दैन। तपाईंको साइटमा Google Analytics ट्यागहरू राखिने बित्तिकै यो शाब्दिक रूपमा सक्षम हुन्छ!
मैले अभियान डाटा प्रयोग गरेर रूपान्तरण र अन्य गतिविधिमा कसरी रिपोर्ट गर्ने?
यो डेटा स्वचालित रूपमा सत्रमा संलग्न हुन्छ, त्यसैले UTM प्यारामिटरहरूसँग त्यहाँ अवतरण गरेपछि ग्राहकले तपाईंको वेबसाइटमा गरिरहेको कुनै पनि अन्य गतिविधि सम्बन्धित छ। तपाईं रूपान्तरण, व्यवहार, प्रयोगकर्ता प्रवाह, लक्ष्य, वा कुनै अन्य रिपोर्ट मापन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इमेल UTM प्यारामिटरहरू द्वारा फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ!
के त्यहाँ वास्तवमा मेरो साइटमा सब्सक्राइबर को छ भनेर क्याप्चर गर्ने तरिका हो?
UTM प्यारामिटरहरू बाहिर अतिरिक्त क्वेरीस्ट्रिङ भेरिएबलहरू एकीकृत गर्न सम्भव छ जहाँ तपाइँ एक unqiue सब्सक्राइबर ID क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तिनीहरूको वेब गतिविधि प्रणालीहरू बीचमा पुश र तान्नुहोस्। त्यसोभए... हो, यो सम्भव छ तर यसको लागि धेरै काम चाहिन्छ। यसको विकल्प भनेको लगानी गर्नु हो गुगल एनालिटिक्स। 360०, जसले तपाईंलाई प्रत्येक आगन्तुकमा एक अद्वितीय पहिचानकर्ता लागू गर्न सक्षम बनाउँछ। यदि तपाइँ Salesforce चलाउँदै हुनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, तपाइँ प्रत्येक अभियानमा Salesforce ID लागू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि गतिविधिलाई Salesforce मा फिर्ता पुश गर्न सक्नुहुन्छ!
यदि तपाइँ यस प्रकारको समाधान कार्यान्वयन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ वा तपाइँको इमेल सेवा प्रदायकमा UTM ट्र्याकिङको साथ सहयोग चाहिन्छ वा त्यो गतिविधिलाई अर्को प्रणालीमा एकीकृत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, मेरो फर्मलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् ... Highbridge.
टैग: अभियानअभियान सामग्रीअभियानको माध्यमअभियानको नामअभियान स्रोतअभियान अवधिईमेल अभियानइमेल मार्केटिङईमेल सेवा प्रदायकहरूGoogle विश्लेषणगुगल एनालिटिक्स अभियान ट्र्याकिंगगुगल विश्लेषक अभियान ट्र्याकिंग urlमध्यमइमेल लिङ्कहरू ट्र्याक गर्नुहोस्ट्र्याक लिङ्कहरूutm प्यारामिटरहरूयूटीएम ट्र्याकिutm_camp अभियानutm_contentutm_mediumutm_sourceutm_term
Adobe Commerce (Magento) मा किनमेल कार्ट नियमहरू सिर्जना गर्न द्रुत गाइड
कसरी इमेल मार्केटरहरूले उनीहरूको ईकमर्स परिणामहरू सुधार गर्न भविष्यवाणी गर्ने विश्लेषणहरू प्रयोग गर्दैछन्